I-Superb T3 phansi kwehholo lemakethe laseNantes-Talensac
Nantes, Pays de la Loire, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Antoine
Ifulethi eliseHyper City Center phansi kwemakethe yeTalensac (imakethe yomlando yaseNantes). I-Bouffay ne-Graslin ngaphansi kwemizuzu engu-5/10 ngezinyawo. Isitobhi se-tram 2min.
Isitayela esidala esinazo zonke izinto ezisetshenziswa ngendawo yokuhlala yesimanje. Izindawo zomlilo zemabula ezihlobisa kuwo wonke amagumbi.
I-balcony enombono omangalisayo weSonto LaseSt Similien (elingakhali).
Umgwaqo othule kakhulu onezimoto ezincane. Wonke amawindi acwebezelwe kabili
Ifulethi elingu-61m2 esitezi sesibili likhanya kakhulu, liwela, elinamavolumu amakhulu.
Isitayela esidala, sihlome ngokugcwele. Amakamelo okulala ama-2 amakhulu anemibhede eyi-2 ephindwe kabili, i-WC ehlukile nendawo yokugezela.
Ukujikijelwa kwetshe ukusuka ku-hyper centre, amathilamu amabili nemigqa yebhasi eduze kwefulethi.
I-balcony ikuvumela ukuthi ujabulele umbono oyingqayizivele we-St Similien Church, ngaphandle kwanoma yimuphi umsindo.
Ikhishi eligcwele nazo zonke izitsha uma kudingeka.
Amabhikawozi, amakhefi, isitolo segrosa, izindawo zokudlela ezinhle ezincane ezizungeze i-Place Talensac, ezansi kwefulethi.
4.55(184 okushiwo abanye)
4.55 · 184 okushiwo abanye
Lapha, ungajabulela umbono ojabulisayo wokuphila, ezimakethe, emigwaqweni, ezindaweni zokudlela nezindawo zokudlela, ngaphandle kokukhohlwa ukubuka "isakhiwo esisodwa esiphakathi kweParis neNew York": umbhoshongo waseBrittany!
Kusukela Talensac emakethe, nichichima izintelezi kanye nemikhiqizo ukuthi wonke umuntu umona kithi, NID aqhwakele phansi 32nd we Tour Bretagne, ungaya a amamitha ambalwa kusukela enkabeni yedolobha, ukufinyelela kwakudala wesifunda noma Indawo Viarme , itshalwe, ngoMgqibelo ekuseni, ngabadayisi bamasekeni.
Antoine, originaire de Nantes je vis maintenant à l'étranger.
Fanny Et Grégoire
Uma ukubhuka kwakho sekuqediwe, i-BNBFACILE ye-concierge yase-Nantes izoxhumana nawe okungenani iviki elingu-1 ngaphambi kokufika kwakho. Ngaleyo ndlela niyovumelana ngesikhathi somhlangano sokunikeza okhiye.
Le concierge efanayo inikeza lezi zinsizakalo ezilandelayo:
1 - Insizakalo YOKUTHENGA IMITHETHO engekude nefulethi ngenani lama-euro ayi-10 lokwehlisa imithwalo (ngeqoqo lezikhwama) kanye nama-€ 20 wediphozithi + ukulethwa kwemithwalo. Kuyokwazi futhi ukufika futhi ukuqoqa okhiye efulethini ngesikhathi esifanayo.
2 - Ukuhlinzekwa "KUKABHEKITHI WOKUQALA" ukuze ube nakho konke okudingayo ekuseni kwakho kokuqala endlini, thintana nabo ngentengo.
Futhi ngihlala ngitholakala ngemiyalezo ye-Airbnb uma unemibuzo.
Qaphela ukuthi nginikeze amashidi kanye namathawula okugeza.
Ekugcineni, ipaki yezimoto zomphakathi itholakala ku-50 / 100m ukusuka efulethini (Parking Talensac).
Uma ukubhuka kwakho sekuqediwe, i-BNBFACILE ye-concierge yase-Nantes izoxhumana nawe okungenani iviki elingu-1 ngaphambi kokufika kwakho. Ngaleyo ndlela niyovumelana ngesikhathi so…
Inombolo yepholisi: 44109000491A9
Hlola ezinye izinketho ezise- Nantes namaphethelo